AKHRISO: Madaxweyne Farmaajo & Dowladda Ingiriiska oo afar qodob oo xasaasi ah ku heshiiyay | shumis.net
Home » News » AKHRISO: Madaxweyne Farmaajo & Dowladda Ingiriiska oo afar qodob oo xasaasi ah ku heshiiyay
AKHRISO: Madaxweyne Farmaajo & Dowladda Ingiriiska oo afar qodob oo xasaasi ah ku heshiiyay
Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain, Boris Johnson iyo Xubno kooban oo Safarka ku wehlinaayay.
Mr Boris Johnson waxa uu kullan saacado badan qaatay la yeeshay Madaxweynaha dalka Maxamed C/llahi Farmaajo oo ay kawada hadleen arrimo dhowr ah.
Kullanka labada Mas’uul ayaa ka dhacay Xarunta Villa Somalia waxaana kamid ahaa qodobada looga hadlay Xaalladda dalka Somalia, Arrimaha Ammaanka, Dagaalka Alshabaab, Macluusha iyo Shirweyne Caalami oo looga hadlayo Arrimaha Somalia oo lagu qaban doono London.
Madaxweye Framaajo iyo Boris Johnson waxay si gaar ah uga hadleen Xaalladda Abaaraha ee Somalia, iyadoo Dowladda Britain 10-million oo Geni ugu deeqday Hawlaha Anaaraha ee Somalia.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain, Boris Johnson ayaa yiri “Iyadoo uu dalka Somalia yahay Waddan Kheyraad badan dhex ceegaagaan, waxaa haddana walaac leh Abaaraha soo laalaabtay, Britain waxa ay garab taagan tahay Somalia kumana fiirsan doono dhibaatada taagan”
Boris Johnson waxa kale oo uu tilmaamay inay Somalia ka taageeri doonaan dhinaca Ammaanka Somalia.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain waxa uu intaa kadib Madaxweynaha Somalia usoo jeediyay hirgalinta 4 qodob oo kala ah:
1-In Dowlada Somalia ay ka dhabeyso la dagaalanka waxa uu ugu yeeray Argagixisada Al-shabaab iyo Daacishta Somalia.
2-In dhalinyarada kasoo goosata Al-shabaab ee la marin habaabiyay loo sameeyo baraarujin gaara isla markaana aan lagula degdegin dil iyo xadgudubyo kale.
3-In Shirweyne Caalami ee looga hadlayo Arrimaha Somalia lagu soo bandhigo qodobo qeexaaya dhibta heysata Somalia iyo baahida ay u qabto Somalia in garab weyn ay ka hesho caalamka.
4-In lasoo bandhigo hoos u dhaca Somalia ka heysta Siyaasada, Garsoorka iyo Amniga, si loo helo gurmad dhan waliba ah maadaama uu shirkaasi Somalia u yahay fursad dhif iyo Khaliil ah.
Dhinaca kale, Qoraal uu Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain, Boris Johnson soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in safarkiisa Somalia uu aad ugu faraxsan yahay isla markaana Somalia ay kasii dhamaanayaan amni daridii ka jirtay.
Title: AKHRISO: Madaxweyne Farmaajo & Dowladda Ingiriiska oo afar qodob oo xasaasi ah ku heshiiyay